Maxaa la door bidaa, oo lagu qaabeynayaa kombuyuutar ama Mac? | Abuurista khadka tooska ah
Naqshadeynta PC ama Mac?
Jorge Neira | | La cusboonaysiiyay 24/04/2017 10:25 | General, dhowr
Inbadan ayaa ah caqabado ina soo food saaray maalin walba waana in go'aamada ay tahay inaan gaarno ay awoodaan naga yeel natiijooyin togan ama taban.
Markaad dooranayso shey waa inaan qiimeynaa kala doorashooyinka in suuqu na siiyo iyo kuwa ku habboon baahiyaheena iyo miisaaniyaddeenna. Hadalkan guud ahaan waa waxa aan sameyno mar kasta oo aan u aadno inaan wax soo iibsanno, xitaa dukaameysiga maalinlaha ah ee supermarket-ka halkaasoo aan ku qiimeyno faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka alaabooyinka ugu dambeyn ku dhaca dambiilkeena. Eedeyntan ka sii muhiimsan ayaa ah qiimaha sheygaasLaga soo bilaabo qasacda wax lagu keydiyo ilaa joodar ama guri, isbarbardhigga xulashooyinka kala duwan waa lama huraan.
1 Laakiin markay tahay qaabeynta, dooro PC ama Mac?
2 Qaar ka mid ah farqiga u dhexeeya PC iyo Mac
Laakiin markay tahay qaabeynta, dooro PC ama Mac?
Mid ka mid ah dhibaatooyinkaan ayaa soo ifbaxaya markaan tixgelinayno iibsashada kumbuyuutar kumbuyuutar oo cusub, si fiican annaga adeegsi shaqsiyeed ama shaqo waana xilligaas markii shakigu nagu fataho inaan doorto PC desktop, badanaa ku saleysan Nidaamka hawlgalka Windows ama dooro xulashada tufaaxa kombuyuutarradeena, Mac.
Iswaafajinta labada nidaam iyo barnaamijyada kaladuwan ee aan maalin walba u isticmaalno waxay dhacdaa maxaa yeelay mid kasta oo ka mid ah shirkadaha waalidka, Microsoft iyo Apple ayaa na siiya noocyada barnaamijyada caadi u ah nidaamyadooda.
Barnaamijyada ugu badan ee gaarka ah ee shaqooyinka loogu talagalay naqshadeynta, muusikada, iwm. ayaa loo diyaariyey labada nidaamba markaa dhibaato gaar ah nagama laaban doonto, in kasta oo ay muhiim tahay haddii aan barnaamij gaar ah u isticmaalno aagga shaqadeena si aan u hubinno in loo heli karo nidaamka aan dooneyno in aan dooranno.
ka barnaamijyada ay abuureen shirkadda Apple kor u qaadista ilaha kombiyuutarka samaynta adeegsiga si ka dhaqso badan marka loo eego barnaamijyada aan ku rakibno kombuyuutarrada lagu rakibay Windows iyo a heerka software, labada madalba waxay noqdaan 100% shaqeynaya. Labada Mac iyo PC-ba waxay la jaan qaadayaan barnaamijyada isticmaalka maalin walba adduunka naqshadeynta garaafka, iyagoo siinaya dadka isticmaala suurtagalnimada inay wax ka qabtaan mid ka mid ah baahiyaha isticmaalaha si wax ku ool ah.
Macs waxaa si weyn loogu isticmaalaa shirkadaha tiknoolajiyada badanaa Maraykanka gudihiisa Windows waa xulashada koowaad ee kombiyuutarada shaqsiga ah, inkasta oo tani ay tahay isbeddel isbeddelaya, iyada oo tiro badan oo isticmaaleyaashu ay doorteen ikhtiyaarka sumadda tufaaxa, inta badanna ay ugu wacan tahay kororka taleefannada gacanta, oo adeegsadayaashoodu markay beddelayaan kombuyuutarkooda waxay doortaan Mac si loo fududeeyo waafaqsanaanta IPhone-kaaga ama IPad-gaaga.
Qaar ka mid ah farqiga u dhexeeya PC iyo Mac
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee kombiyuutarada waa taas waa la isku habeyn karaa cusboonaysiintiisuna aad ayey uga fududdahay maadama inta badan kombuyuutarradu ay yihiin kuwo si fudud loo beddeli karo, oo ah wax aanu Macs noo oggolaanayn. Ma yahay dhibic u roon Aad bay u tahay in la tixgeliyo maaddaama aan ku dheereyn karno nolosha qalabkeenna isbeddelo gaar ah.
Kumbiyuutarrada kumbiyuutarada ayaa ballaaran way ka jaban yihiin, mid ka mid ah sababaha iyada oo aan loo eegin horumarka tikniyoolajiyadda ay na siinayaan, ay siisay sarreynta iibka muddo sannado ah. Macs, tikniyoolajiyadda ka sakow waxay na siinayaan qaabeyn, wax ay PC-gu caadi ahaan iska indhatiraan, oo ah wax soo saar muhiimadda weyn u leh korontada marka loo eego quruxda.
Mac wuxuu na siiyaa nidaam dhan-in-mid ah, oo leh 4K iyo 5K bandhig. Saldhiga ugu yar ee aad leedahay Mac iyo Windows, ayaa ah inay sidoo kale na siiso faa iidooyin ku saabsan ka hortagga hanjabaadaha iyo fayrasyada.
Faa'iidada kale ee Macs waa inay yihiin dhib yar oo dareen badan in la isticmaalo, wax aan sidoo kale ka arki karno IPhone iyo IPad. In kasta oo aan hore u ahaan jirnay isticmaaleyaasha Windows, haddana muddo gaaban oo la-qabsi ka dib, waxaan arki doonnaa in isticmaalkiisu noo fududaan doono.
Tani waa lagu daray si loogu isticmaalo naqshadeynta, Barnaamijyada ku habboon nidaamka Apple waxay ka dhigayaan nidaamka shaqada oo dhan mid dareen leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Naqshadeynta PC ama Mac?
Luis Carrillo dijo
Baa kaliya wuxuu ka hadlayaa qiimaha wax intaa ka badan waxaanan u maleynayay inay xusi doonaan xawaaraha iyo waxqabadka labada barxadood
Jawaab Luis Carrillo
Susana perez pazos dijo
Jawaab Susana Pérez Pazos
Leonel Manzanarez dijo
Iyadoo sirdoon leh!
Jawaab Leonel Manzanarez
Macno malahan, waxaan lasoo shaqeeyay IMacs oo murugo xambaarsanaa, arinta ayaa ah in markasta la ilaaliyo nidaamka iyo nadaafada deegaanka shaqada. Faa'iido ma leh in la yiraahdo macdu waxay si fiican u qabataa wax yar markii ay qaali tahay isla markaana isla qiimahaas waxaad heleysaa pc oo isku mid ah ama ka wanaagsan sameeya.
Jawaab Norberto Alonso Rodríguez
Waa su'aal sicirka macno ahaan waxay umuuqataa caqli gal in lagu bixiyo wax kabadan laba jibaar wax si lamid ah aniga ila sameeya. Shaqada waxaan ku leenahay qaabkii ugu dambeeyay ee Mac (qiyaastii 2500 euracos oo ka soo jeeda garabka), maxaa yeelay in ka yar kala bar guriga PC-gaaga ayaa 20 jeer ka awood badan, wuxuu sameeyaa si isku mid ah oo dhaqso badan iyo 32-inch HD HD aan ka fogayn. By the way, ka hor intaanan badalin Mac (taasi way ka fududeyd sameynta shahaadada mastarka si aan u dhigo xusuus badan) Waxaan qori karay encyclopedia xaddiga dhibaatooyinka ay i siisay, maalin maalmaha ka mid ah ayaan jabiyay rikoor anigoo dhigaya labo bog 9 saacadood gudahood. ... iyo maalin kasta, kuwa cusub (waxaan haysannaa 6 dhammaantoodna qasan) waxay nagula yaabeen xoogaa yar oo cusub oo ah qalabka farxadda leh ee tufaaxa. Waallidu waa tan inanta inanteed saaxiibkeed (10 jir) ay qolkeeda ku leedahay mac ... maxaa yeelay?
Dhibaatada kaliya ee jirta ayaa ah in aan ku waasho lasocodka gaaban ee kumbuyuutarka markii aan ka guurayo guriga ama shaqada u wareegayo.
qasriga sebastian dijo
Naqshadeynta waxaa sameeyay qofka, mashiinka ma sameynayo, natiijadu waa isku mid labadaba
Ku jawaab Sebastian Palacio
Sandra Cristina Gonzalez Uslar dijo
Waxay u egtahay inaad dhahdo burushku wuu kaamil noqdaa ... Da Vinci ma daneeyo, sax?
Jawaab Sandra Cristina Gonzalez Uslar
Samuel Ascaso dijo
qoto dheer, maqaal dhameystiran oo lama huraan ah, sidii had iyo jeerba. Hambalyo
Jawab Samuel Ascaso
Alexander Lima dijo
Natiijada kama dambaysta ah, macmiilku ma dareemo mana siinayo wax dambi ah haddii aad ku sameysay gabal PC ah oo la jarjaray ama imac moodada ah. Kuma bixiyo kharashka birta qurxoon, macaamiishayda midkoodna taas ma oga.
Jawaab Alejandro Lima
Had iyo jeer Mac!
Naqshad wanaagsani shaqo kuma laha haddii lagu sameeyo Mac ama PC, wax kale waa habka looga shaqeeyo hal madal ama mid kale. Aniga ahaan, waxaan u arkaa inay tahay mid aad u raaxo badan waxaanan abuuraa dukumiinti fudud oo isticmaalaya Mac.
Kuma raacsani sida aan macquul u aheyn balaarinta mac marka loo eego pc-ga: waxay kuxirantahay qaabka la xushay.
Oo hadaan ka hadalno anshaxa soo saarayaasha, halkee iyo yaa sameeya? Aad bayna muhiim u tahay, Mac waa sida Bang & olufsen, iyagu kaliya waxay naqshadeeyaan kiiska, inta soo hartayna waxay iibsadaan shatiyada si gaar ah oo had iyo jeer maahan, ugu badnaan kuwa ugu caansan muddo lix bilood ah.
Wax ku iibso anshax iyo jooji nacasnimada, maxay faa'iido u leedahay noqoshada cilmiga bey'ada iyo inaad iibsato kumbuyuutar lagu soo saaro dhinaca kale ee adduunka oo ay adeegsadaan dadka laga faa'iideysto? Iyo ku saabsan dhadhanka midabada.
Ku jawaab Alfredografico
Tani waa sheekada haweenka naqshadeeyayaasha ah
Wax kasta oo ay tahay inaad ka ogaato noocyada faylka ee qaabeynta qaabdhismeedka ah